Ngoku ungathenga iXiaomi Mi Band 3 eSpain | I-Androidsis
Sele igqithe iinyanga ezintathu uXiaomi eveza isizukulwana sakhe esitsha samabhanti. Imodeli entsha yenkampani yiXiaomi Mi Band 3, Ebonakala inescreen esikhulu ukuza kuthi ga ngoku. Ngaphandle kokukhutshwa kwakudala, ukufumaneka kwayo kwihlabathi liphela kwakusikelwe umda. Ngethamsanqa, eSpain akufuneki silinde ukuyithenga.
Ukususela ukusukela namhlanje singayenza ngokusesikweni ngale Xiaomi Mi Band 3. Okokugqibela, isacholo esitsha sophawu lwesiTshayina ngoku siya kufumaneka. Imodeli apho uphawu lufuna ukwandisa ubukho balo kweli candelo lentengiso.
Singayithenga ukusukela namhlanje, nangona okwangoku izakuthengiswa eAmazon nakwiivenkile zeXiaomi. Iya kwenza njalo ngexabiso lama-euro angama-29,90, ibinguye lowo ebebhengeziwe kwingxelo yakhe. Ke akukho zimanga kule meko.
Iya kuba yiveki kuphela efumaneka kwiAmazon, kwaye ukusukela nge-14 kaSeptemba Singayithenga le Xiaomi Mi Band 3 ngokusesikweni kwiivenkile ezibonakalayo, ezinje ngeFNAC okanye iMediaMartk, abasasazi abaqhelekileyo beemveliso zorhwebo lwaseTshayina kwilizwe lethu.
Ke ukumiliselwa kwale Xiaomi Mi Band 3 kuyakothuka, kodwa akusafuneki silinde nantoni na ukuze sikwazi ukuyifumana. Isacholo esiza ngenjongo yokudlula kwisizukulwana esidlulileyo kwintengiso, eyaba yimpumelelo enkulu kwibrendi. Ke unomsebenzi onzima ophambi kwakho.
Ukuba sele uyithengile, unako Qwalasela iMi Band 3 kunye nesikhokelo sethu.
Kuya kuba yimfuneko ukubona ukuba iyakwazi ukuthengisa kakuhle eSpain. Icandelo elinxibayo likhula ngokukhawuleza kwintengiso, ke ayothusi into yokuba ngenxa yexabiso layo eliphantsi, le Xiaomi Mi Band 3 yimpumelelo entsha yomenzi. Ngaba uza kuyithenga le bracelet?
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Iiselfowuni » Xiaomi » IXiaomi Mi Band 3 iyafumaneka eSpain ukusukela namhlanje
I-Google Pixel 3 iya kuboniswa ngo-Okthobha 9 eNew York